म बिस्तारै उहाँको शरीरमा घोडा चढे…. (यौन कथा) | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
प्रकाशित मिति १४ बैशाख २०७६, शनिबार १०:१६ लेखक नेपाली जनता
काठमाडौँ । दिनभरीको थकानले ज्यान स्वात्तै गलाउछ। झन त्यसमाथी, घरमा एक्लै बस्दा मनमा अनेक कुरा खेल्ने । अचेल, एउटा स्कुलमा नर्सरीका केटकेटी खेलाउन थालेदेखी त झन ज्यान दुईगुणा गल्छ । ब्यस्त भएर दैनीकी लथालिङ्ग हुँदा कहिले शनिवार आउला र आराम गरुँला जस्तो मात्र हुन्छ।
कम्मरमा बेरिएका हातले कति बेला मेरा स्तनका मुन्टाहरु चलाउन थाले एकछिन त पत्तै पाइन। म रुन थालेकी थिए, उहाँले बुढी औलाले दैलाको मुखमा दबाएर भन्नु भयो, “चुप लाग्छेस कि म छोडिदउँ रण्डी” त्यो बेला मलाइ रण्डी शब्द यती प्यारो लाग्यो कि, हैन नछोड्नु भन्न वाध्य भए। उहाँले मलाइ रण्डी भनेको नि मन परेको थियो। उहाँका औलाहरु भित्र बाहिर गरिरहेका थिए। बुढि औलाले ठाँउमा जे गर्नु पर्ने थियो गरि रहेका थिए। कान्छि भिजेर निथ्रुक्कै भएकी थिइ। मलाइ उहाँका औलाँहरु अझै भित्र पुगुन भन्ने लागेको थियो। जिउ पसिनाले रुझेको थियो, उहाँले छिटो छिटो गति बढाउदै, लौ भल बगा रण्डी लौ भल बगा रण्डी भन्दै कुवा खने झै खन्दै हुनुहुन्थ्यो। कुवाको पानी रोकेर राखेको ढुङ्गा झिके झै, म एक्कासी ह्वाललल बग्न थाले, मेरो कान्छीको पानीले उहाँको कम्मरमुनी पुरै भिजेको थियो। केहि समयको अन्तरालमा दुईचोटी भल बगाएकी म, अरु सुख सहन सक्छु झै लागेको थिएन। उहाँको कान्छो रिसले भुन्भुनिदै थियो।
उहाँले च्याप्प समातेर मलाइ खाटमा उत्तानो पार्नु भयो, मेरो खुट्टालाइ काँधमा चढाएर कान्छालाइ म भित्र ढेल्नु भो, औलाले नछोएको ठाँउमा कान्छाको टाउको ठोक्किदै बाहिर निस्कदै गर्यो। मलाइ भित्रबाट कलेजो धकेलीए झै महसुस भयो। अघी त एउटा ढुङ्गा झिक्नु भए झै भएको थियो। खन्ती जस्तो औजारले ग्वाम ग्वाम खन्दा मेरो ज्यानमा भएको अर्को ढङ्गा नि चर्की सकेको थियो, फेरी खल्खली बग्न थाले। उहाँले कान्छोको मुन्टो निकालेर मेरो पेटमा प्याट्ट हान्नु भो, कान्छोले दही खाएपछी उफ्रेको बच्चा झै मेरो पेटभरी सेतै छाद्यो। साभार गाेर्कण न्युज
सिलगढी नगरपालिकाबाट १५ बालश्रमिकको उद्दार
डोटी । डोटीको दिपायल सिलगढी नगरपालिकाले नगरलाई बालश्रम मुक्त बनाउने अभियानलाई तीब्रता दिएको छ । अभियानको क्रममा शुक्रबार थप…
निजी विद्यालयको लुटविरूद्ध प्याव्सन र एनप्याव्सनको सबै कार्यालयमा तालाबन्दी
काठमाडौँ । संयुक्त विद्यार्थी संगठनले निजी विद्यालयमा भएको चर्को शुल्कवृद्धि फिर्ता गर्न सञ्चालकहरुले अटेरी गरेको भन्दै अाज प्याव्सन र…
ट्वीटर प्रयोगकर्ताका डाटा बिक्री गरेको खुलासा
न्युयोर्क । माइक्रोब्लगिङ साइट ट्वीटरले समेत क्याम्ब्रिज एनालिटिकाका शोधकर्तालाई लाखौँ ट्वीटर प्रयोगकर्ताका डाटा बिक्री गरेको खुलासा भएको छ ।
बेग्लाबेग्लै घटनामा ३ को मृत्यु
विराटनगर । मोरङ, इलाम र संखुवासभामा भएका बेग्लाबेग्लै दुर्घटनामा मंगलबार तीनजनाको मृत्यु भएको छ । मोरङको सुन्दर हरैंचा नगरपालिका…
पहिलो सन्तान छोरी जन्माउनेलाई प्रोत्सान भत्ता, भत्ताको रुपमा तीन हजार रुयैयाँ पुरस्कार दिएर सम्मान गर्ने !
विराटनगर । शिक्षित परिवारमा पनि छोरा र छोरीबीचको विभेद कायम देखिएपछि विराटनगर महानगरपालिकाले ‘छोरी बचाऊ अभियान’ सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
मेषः– दिन सामान्यतया अनुकुल नै देखिन्छ । समस्याको पहिचान गरेर मात्र समाधानमा लाग्न सके उपलब्धि राम्रै हात पारिनेछ ।…